अपराध Archives - Jhapa Today
एसिड बेच्न अनुमतिपत्र अनिवार्य
बिर्तामोड, असोज १० । एसिड प्रहारका घटनामा कमि नआएपछि सरकारले यसको उत्पादन, निकासी तथा बिक्रीमा कडा कानुन ल्याउने भएको छ । सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थको नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अध्यादेश […]
दमक, भदौ २९ । आमासँग सामान्य विवाद हुँदा झापाको कमल गाउँपालिका ७ का एक युवाले आमाको हत्या गरेका छन् । आइतबार साँझ ८ बजेतिर ठुलो बाह्रघरेनजिकै मुसहर बस्तीका २४ वर्षीय दिनेश ऋषिदेवले बञ्चरो प्रहार गरी […]
सशस्त्र प्रहरीद्वारा ब्राउन सुगरसहित दुईवटा मोटरसाइकल बरामद
बिर्तामोड, भदौ २८ । सशस्त्र प्रहरीले झापा गाउँपालिका ५ पन्थापाडास्थित राधाबस्तीबाट लागुऔषध ब्राउन सुगर बरामद गरेको छ । आइतबार साँझ गरिएको चेकजाँचमा मे. २ प ७९४ नम्बरको होन्डा साइन र मे. ११ प ८०७५ नम्बरको […]